काठमाडौँ, ५ फागुन । उमेर ७२ तर मुस्कानमा जवानीकै झल्को । हिमालको हिउँजस्तै टन्न मिलेका दाँत, हाँसिरहने बानी । बिहानदेखि साँझसम्म चोयाचेत्राको काम तर कतै देखिँदैन थकानको महसुस । सात दशक पार गरेको संघर्षको पेटारो सित्तिमिति खोल्न मन लाग्दैन उहाँलाई । उल्टै प्रश्न गर्नुहुन्छ– ‘ए, बरै ! पुराना दुःख सम्झेर के हुन्छ र ? आज रमाइलै गरी बितेको छ, यति भए त पुग्यो ।’
हरेक व्यक्तिका आफ्नै कथा हुन्छन् तर सबैका कथा मन छुने हुँदैनन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१० लमडरुवा डाबरस्थित ऐलानी बस्तीको सानो झुपडीमा बस्ने एक वृद्धा आमाको संघर्ष र उद्यमशीलताको निकै मार्मिक कथा छ ।
सानै उमेरदेखि बाँसका सुपा बुन्न सिकेकी ७२ वर्षीया भुमकला घर्तीको बुढेसकालमा यही सीप नै सहारा बनेको छ । अहिले पनि उहाँ दैनिक तीनवटा जति सुपा बुन्नुहुन्छ, आफू र श्रीमान्को जोहो यसैबाट चलेको छ । ‘यत्ति त होइन, सानो श्रीमान्को पसल पनि छ’ –आफ्नै सीप र श्रमको त्यति बढाइचढाइ गरेको मन पर्दैन उहाँलाई । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।